BASBAAS IYO PICKLING EGGPLANT: HADDII LOO BAAHDO, GOORTA IYO SIDA LOO HELO SI HABBOON LOO QAADO GEEDO, DARYEEL KA DIB MARKII TRANSPLANTING - BEER CAGAARAN
Shuruudaha iyo sifooyinka basbaas iyo pickling eggplant: sida loo diyaariyo dhirta iyo daryeelkooda iyaga ka dib qaabsocodka
Habka caadiga ah ee geedo sii kordhaya ee basbaaska iyo eggplants waxaa ka mid ah qaadista khasab ah.
Waxay xaqiijinaysaa horumarinta wanaagsan ee dhirta dhalinyarada ah waxayna u diyaarisaa iyaga si ay ugu noqoto meel joogto ah ee deganaanshaha: aqalka dhirta lagu koriyo ama dhulka furan ee filimka.
Si loo dhigo basbaaska iyo eggplant si ay u gudubto dhibaato la'aan, waxaa muhiim ah in la doorto waqtiga saxda ah oo si taxadar leh u dhaqma, ka taxaddar inaadan dhaawac u geysan cayayaanka jilicsan.
Basbaas macaan iyo eggplants - dhaqamada, gaar ahaan dalbashada daryeel. Dhirta Kuwani waxay leeyihiin nidaam xidid aad u jilicsan oo xasaasiyad ah oo ku fekeraya tabar darro si loogu bedelo. Sidaa daraadeed, habka loo wareejiyo geedo ka sameysan weelka caadiga ah ee dhoobada dhaadheer waa in si taxadar leh loo fuliyaa, isagoo taxaddaraya inaanan dhaawacin caleemaha.
Waa wax aan macquul aheyn in laga tago geedo ku jira caag caadi ah muddo dheer. Dhirta Young ma laha nafaqooyinka ku filan, iyo xididdada geedo, koraya, intertwine leh kasta oo kale.
Miyaan u baahanahay in aan leefaabiyo basbaaska iyo ukunta? Beerta qaar ayaa doorbidaa inaanan dhicin dhirta, abuurka miraha dhirta kala duwan ama kiniinnada peat.
Noocan ah habka ku haboon abuurka leh biqilka aadka u fiican, laakiin weli ma saaro muuqaalka caleemaha daciifka ah, oo aan ku habooneyn beerashada sii kordheysa. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan diyaarinta basbaas iyo miraha ukunta ka hor intaan la beeri.
Classic qaadashada waxay kaa caawineysaa inaad doorato geedaha ugu xoogan uguna guusha badantaas oo mustaqbalka ay u kobcin doonaan dhirta dhirta oo buuxa oo keena miro fiican.
Goorma ayaad soo qaadataa?
Transplantation ee caleemaha yar yar kharashka in marxaladda dhismaha ee caleemaha ugu horeysay ee runta ah. Qaar waxay jecel yihiin geedo qashin ah oo basbaas ah iyo ukunta ka dib marka ay si buuxda u soo baxaan caleen ugu horaysa, kuwa kale waxay sugaan ilaa 2 ama 3.
Da'daan da'da this, geedo waa jilicsan yahay, laakiin horey u leeyihiin siinta ku filan oo awood ah si ay u caawiyaan ka badbaadi beerka.
Ka dib qaadashada waa halis: xididdada la horumariyey way u fududahay inay waxyeello u geysato, warshad noocan oo kale ahi si fiican uma qaadato oo u dhiman karto.
Waqtiga ugu wanaagsan ee qaadashada waa 15-20 maalmood ka dib beerashada abuurka. Waxaa lagama maarmaan ah in diiradda muuqaalka ah ee geedo, bannaanka u badan yihiin basbaaska iyo eggplant sida ay tahay kalandarka dayaxa. Wixii maalmo ku haboon marka dayaxa uu ku hoos jiro saamiga Virgin
Calaamaddaani waxay saameyn wanaagsan ku leedahay koritaanka geedo. Si kor loogu qaado dhalidda, waxaad samayn kartaa soo qaadashada hoosta calaamadeynta Kansarka, Kornayl, Taurus ama Roodhi. Sanadka 2016-ka, maalmaha ugu wanaagsan ee soo-saarka eggplants iyo basbaaska waxay ahaayeen Febraayo 24, 27, 28 iyo 29, mudo ah 1 illaa 5 iyo 26 ilaa 31 Maarso, laga bilaabo 1 ilaa 5 iyo 25 ilaa 29 Abriil.
Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo taariikhaha oo keliya, laakiin sidoo kale waqtiga maalinta, waxaa sidoo kale lagu tilmaamay kalandarka dayax-gacmeedka.
Diyaarinta habka tallaalka
Si loo helo si habboon, waa muhiim inaad raacdo tilmaamaha si sax ah. Marka hore, dhulka waa la diyaariyaa.
Ideal - isku dar ah peat ama humus leh beerta beerta ee is barbardhigga. Dhulka ku samee dambaska ama bacriminta macdanta adag: superphosphate, amooniyam amaseiyam, chloride potassium.
Wixii transplanting u baahan tahay dheriyo yar oo aan ka badnayn 150-200 ml. Qoyaanku waxay istaagaan taangiyada waaweyn, taas oo keenta acidification ee ciidda iyo kallana..
Si aad u qaadato basbaaska iyo eggplants, waxaa fiican in la isticmaalo dheryooyinka caagagga ah, laga soo bilaabo geedaha koray waxaa lagu beddelaa habka isdhexgalka. Eggplants waa in aan lagu beeray weelasha peat, xididdada daciifka ah ma awoodi doonaan inay gasho derbiyada, taas oo hoos u dhigi doonta horumarinta dhirta ka dib marka lagu tallaalo. Qeybta hoose ee dheriga ayaa u baahan in la sameeyo godad biyo.
Qaar waxay doorbidaan in ay quustaan ​​2 geedo oo basbaas ah oo hal dheri ah. Farsamadani waxay leedahay saameyn togan oo ku saabsan dhalidda dalagga, waxayna u fiicantahay duurka si gaar ah. Haddii aad qorsheyneysid inaad ka mid noqoto labada lamaane, waa inaad doorataa dherer weyn (ugu yaraan 300 ml).
TALO! Eggplant wuxuu ka fiican yahay inuu midba mid u fadhiisto.
Sidee loo sameeyaa basbaas iyo ukunta?
Maalin ama dhowr saacadood ka hor qashinka geedo ee weelka aad u baahan tahay biyo fiicansi loo abuuro geedo si sahlan loo soo saaro dhulka. Warshad kasta waa la qodayaa kaliya ka hor intaysan ku tallaalneyn scapula yar yar.
Haddii aysan jirin jilbaha, waxaad isticmaali kartaa saqaf alwaax ah ama qaado. Jeermigu waa si tartiib ah poddevaetsya oo si wadajir ah loola wadaago qoob ka mid ah ciidda. Xoqdo caleemaha ma awoodo, way fududahay in la jeexo.
Substrate ayaa loo daadshay weelka oo la burburiyey. Bartamaha god ayaa la sameeyaa 2-3 cm qoto dheer. Xididdada geedo yar yar waa in si xor ah loo dhigaa. Xididida xididada laguma talin.. Guntinta ayaa lagu muujiyey oo keliya geedo badan oo koraysa, horumarka degdegga ah ee loo baahan yahay in waxoogaa hoos u dhaco.
Sprouts waxaa lagu beeray si aan caadi aheyn, aaska xad-dhaafka ah wuxuu sababi karaa digaagga. Geedo cusub oo la beeray oo la rusheeyey lakabka peat.
Xaglaha ayaa ku yaal meel u roon sida ugu macquulsan, ka dib markii laga beerto, waxaad si tartiib ah u jiidi kartaa jirida. Ciidda ku wareegsan qoorta ayaa yar yar. Haddii uu dego, waxaad ku daadi kartaa qaar ka mid ah peat.
Daryeelka dhirta ka dib soo qaado
Ka dib marka la soo qaado, dheriyada ayaa si adag loo dhigaa godad qoto dheer. Meesha ugu fiican ee dhirta waa xayawaanka daaqada koonfur ama koonfur bari. Geedo yar yar waxay u baahan yihiin iftiin iftiin leh, halka raajooyinka tooska ah ee caleemaha waa in laga fogaadaa. Isla markiiba ka dib qaadashada, dhirta aan la waraabin, haddii ay lagama maarmaan noqoto, waxaad ku ridi kartaa oo kaliya carrada yar.
Heerkulka qolka waa inuusan noqon mid aad u sarreeya. Habka ugu fiican - 20-24 digrii inta lagu jiro maalinta iyo 18-20 - habeenkii.
Madaarka iyo eggplants jecel hawada cusub, sidaas darteed waxay u baahan tahay in qolka lagu qalo. Haddii geedo yihiin daciif ah, waxaa habboon in ay ku ridaan a mini-aqalka dhirta lagu koriyo ee hore.
Ka dib 4-5 maalmood kadib waxaa lagula talinayaa in aad qaaddo waraabinta ugu horeysa biyo kulul diiran. Dhirta waxaa si fiican loo waraabiyaa, iyadoo la isticmaalayo qaaddo ama biyo yar yar. 10 maalmood ka dib, geedo xidid leh waxaa lagu quudin jiray xal aqueous ah Bacriminta macdanta, biyaha ash ama faleebo ah ee maraboob. Quudinta ayaa lagu celiyaa 2 toddobaad kadib. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qaababka waraabinta basbaaska iyo ukunta.
Geedo si haboon loo soo qaato waxay u egyihiin kuwo caafimaad qaba, xooggan, macquul ah. Caleemaha dhirta oo aan la jiidin, afkoda ma fidiyo, midabka cagaaran waa mid cad oo cufan. Haddii ubaxyada dhalinyaradu ay u engegaan oo ay ka danbeeyaan koritaanka, waxay qiimeeyaan qorshaha daryeelka ee iyaga.
Waxaa laga yaabaa in dhirta yaryar aanay lahayn iftiinka qoraxda, nafaqooyinka ama qoyaanka.
Ka dib markii la soo qaado, geedo ku koraan 80-85 maalmood oo kale, ka dibna waxaa lagu wareeri karaa galay aqalka dhirta lagu koriyo ama dhulka.
Waxaan rajeyneynaa maqaalkeena ayaa ka jawaabay su'aasha ah in ay lagama maarmaan tahay in la cuno bataatada iyo basbaaska?
Ka taxaddar qaababka kala duwan ee eggplants sii kordhaya, gaar ahaan beertooda sida ku xusan kalandarka dayaxa iyo waa suurtogal in ay ku koraan guriga?
Iyo sidoo kale maqaalo ku saabsan geedo eggplant:
Sidee loo diyaariyaa abuurka beeritaanka?
Dhamaan sababaha dhibco cad caleemaha, iyo sababta ay u xanuujin karaan?
Cayayaanka waaweyn iyo sida looga takhaluso?